မောင်းတောမြို့၌ရိုဟင်ဂျာများကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးနေ | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
The Voice of Rohingyas
M M History
မောင်းတော ။ ။ ယနေ့နံနက် ၅ နာရီမှ စ၍ မောင်းတောမြို့နယ်၊ ညောင်ချောင်းကျေးရွာကို စစ်တပ်၊ ရဲတပ် ဖွဲ့၊ လုံထိန်းနှင့် နယ်စပ်ဒေသကွပ်ကဲရေး (နစက) များမှရွာကိုဝိုင်း၍ ပိတ်ဆို့၍အပြစ်မဲ့ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် များကိုအစုလိုက်အပြုံ လိုက်ဖမ်းဆီးနေကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
ယနေ့နံနက် ၅ နာရီတွင် ညောင်ချောင်းကျေးရွာကို စစ်တပ်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ လုံထိန်းနှင့်နစကများက ပူးတွဲ၍ ရွာသူရွာသားများ တိမ်းရှောင်၍ မရအောင် ပိတ်ဆို့ ထားခဲ့သည်။ ထို့နောက် အပြစ်မဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် များကို တစ်အိမ်တက်ဆင်း အစုလိုက် အပြုံလိုက်ဖမ်း ဆီးကြောင်း သိရသည်။ ထို့အပြင် ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီး များကိုလည်း ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှု များပြုလုပ်ပြီး ၊ ငွေကြေးတတ်နိုင် သူအချို့ ကိုငွေညှစ်၍ ပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။
မောင်းတောမြို့နယ် တရားသူကြီးဦးခင်မောင်ရွှေမှ အပြစ်မဲ့ ရိုဟင်ဂျာများကို ဇွန်လ အကြမ်းဖက်မှုကြီးတွင် ပါဝင်သည်ဟု မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲ၍ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဖမ်းဆီးရန် ၀ရမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဘဂုံးနားရွာတစ် ရွာထဲမှ ၄၂ ဦးကိုဖမ်းရန် ၀ရမ်းထုတ်ထားပြီး ထိုရွာမှ ၅၄ ဦးကိုယခင်ကဖမ်းဆီး၍ ဘူးသီးတောင်မြို့နယ် အကျဉ်းထောင်၌ ချုပ်နှောင်ထားသည်။ ဦးခင်မောင်ရွှေသည် ရခိုင်အစွန်းရောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး၊ ဇွန်လ တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော အကြမ်းဖက်မှုတွင် ရိုဟင်ဂျာများကို ဖမ်းဆီးခြင်း၊ သတ်ဖြတ်ခြင်းတို့တွင် ဦးဆောင်ပါဝင် လှုပ်ရှားခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အကြမ်းဖက်မှုတွင် ရိုဟင်ဂျာများပါဝင်ခဲ့သည်ဟု ပုံကြီးချဲ့သတင်း လွှင့်သူ တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
ယခုအခါညောင်ချောင်းကျေးရွာမှ ၁၄ ဦးကို ဖမ်းဆီးရန် ၀ရမ်းထုတ်ထားပြီး၊ ထိုဝရမ်း ထုတ်ထား ခံရသူ များမှာ ရွာမှရှောင်တိမ်း နေသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ အပြစ်မဲ့ ရိုဟင်ဂျာများကို ဖမ်းဆီးနေခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ရိုဟင်ဂျာ များအားလုံး ယခုကဲ့သို့ဖမ်းခံရမည်ကိုစိုးရိမ်လျက်ရှိကြောင်း မောင်းတောမြို့မှဒေသခံတစ်ဦးမှပြောပါသည်။
ထိုဒေသခံမှ “ရခိုင်ပြည်နယ်က အုပ်ချုပ်ရေး အာဏာပိုင်အများစုက ရခိုင်အစွန်းရောက်တွေဖြစ်တယ်။ သူတို့ကအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ပြီးတော့အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဖမ်းတယ်။ နေပြည်တော် ပြည်ထောင် စုအစိုးရရဲ့ ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲကမန်တွေကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်တယ်။တခါတလေ နေပြည်တော် ရဲ့ အမိန့်ကိုမလိုက်နာကြဘူး” ဟုဆက်လက်ပြောသည်။
ဘင်္ဂလီမဟုတ်သော ရိုဟင်ဂျာများကို ဘင်္ဂလီလူမျိုးဟူ၍ အတင်းအဓမ္မမှတ်ပုံတင်ရန် အာဏာပိုင်များမှ ကြိုးစားလျက်ရှိသည်။ ထိုသို့မှတ်ပုံတင်ရာတွင် အီလက်ထရွန်နစ်လက်ဗွေ၊ ဓါတ်ပုံများ ရိုက်ခြင်းပါဝင်ပြီး ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး ဟူသည်လူမျိုးအမည်ကွယ်ပျောက်အောင်ပြုလုပ်နေခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုအခါ ငါးခူရကျေးရွာ မှရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်များကို ဘင်္ဂလီလူမျိုးလက်ခံရန်အတင်းအဓမ္မပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာလ (၂၂) ရက်နေ့တွင် နစကနယ်မြေ (၅) မှ အရာရှိများဖြစ်ကြသည့် ၀င်းလှိုင်နှင့် ထွန်းထွန်းနိုင် တို့မှ ဦးဆောင်၍ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင်များအား ဘင်္ဂလီဟု အတင်းအဓမ္မ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းခြင်း များပြု လုပ်ခဲ့သည် ဟုသိရသည်။ နစက အရာရှိများမှ ဤသည်မှာ အထက် အမိန့်ဖြစ်ပြီး မလိုက်နာပါက ဖမ်းဆီးခံ ရမည်ဟု ရွာသူရွာ သားများအား ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
အောက်ပါ (၇) ဦးအား ဘင်္ဂလီဟူ၍ လက်မှတ်မထိုးနိုင် ဟုငြင်းဆိုသောကြောင့် ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း ဥရောပ ရောက်ရိုဟင်ဂျာများကောင်စီ (ERC) ၏မီဒီယာသတင်းအရသိရသည်။
(၁) နဇီရ်အဟမတ် (ဘ) ဦးဇကီရ်အဟမတ် (အသက် ၃၀ နှစ်)
(၂) အဘူလ်အာလမ် (ဘ) ဦးအာသာအုလ္လာ (အသက် ၂၇ နှစ်)
(၃) နူရ်အာလမ် (ဘ) ဦးမိုဟာမတ်ရှဖီ (အသက် ၄၆ နှစ်)
(၄) ဟူးစိန်အဟမတ် (ဘ) ဦးနူရ်အာလမ် (အသက် ၁၉ နှစ်)
(၅) ဇကီရ် (ဘ) ဦးနူရူရ်ဇလာလ် (အသက် ၃၁ နှစ်)
(၆) ဆယာဒ်နူရ် (ဘ) ဦးဆယာဒ် (အသက် ၂၅ နှစ်)
(၇) အာမန်အုလ္လာ (ဘ) ဦးမိုဟာမတ်အုလ္လာ (အသက် ၃၁ နှစ်)
အောက်ပါ (၂) ဦးမှာ အတင်းအဓမ္မခြိမ်းခြောက်မှုများကြောင့် ဘင်္ဂလီဟုလက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရကြောင်းသိရ သည်။
(၁) ရှောကဲသ်အလီ (ဘ) ဦးအရှုအလီ (အသက် ၃၅ နှစ်)
(၂) ရှားအာလမ် (ဘ) ဦးမိုဟာမတ်အာလမ် (အသက် ၃၆ နှစ်)
ရိုဟင်ဂျာနှင့် ကမန်မွတ်စလင်များ အပေါ် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး ဖိနှိပ်မှုများပြု လုပ်နေ သည်မှာ လပေါင်း အတန်ကြာ လာပြီဖြစ်သည်။ ယခုအခါ လူမျိုးသုဉ်းသွားတော့မည့် အနေအထား သို့ရောက် လုနီးနီးဖြစ်နေ ပြီဖြစ်သည်။
This entry was posted on December 30, 2012, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
မြန်မာများ ခေါ်ဆိုသော “ရခိုင်” လူမျိုး | ဌေးလွင်ဦး →
PDF ဖိုင်များကို Mozilla Firefox ဖြင့် ဖတ်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး မြန်မာစာကို ကြည်ကြည်လင်လင် ထင်ထင်ရှားရှား ဖတ်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၁၈၂၄ ခု အင်္ဂလိပ်-မြန်မာပထမစစ်ပွဲ ပြီးတဲ့အချိန်ကစခဲ့တဲ့ဒီနယ်မြေချဲ့ထွင်မှုဟာ အာရေဗျကျွန်းဆွယ်မှာ ၁၈ရာစုအတွင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ ..
Initiate sending UN peace keeping force
First Yr. Geography Syllabus existence of Rohingya: တက္ကသိုလ် ပထမနှစ် ပ ထ ဝီ ဝင် ဘာ သာ ရပ် တွင် “ရိုဟင်ဂျာ” အ ကြောင်း သင် ရိုး တွင် ပြ ဌာန်း ထား ခြင်း
ထူးဆန်းသောနည်းဖြင့် သေဆုံးခဲ့သည့် ကမ္ဘာကျော်များ
“ အီဒုလ်ဖိသွိရ်ပွဲတော်နေ့ ”
Myanmar’s Rohingya Muslims flee to Australia
ဥပဒေပြဌာန်း၍ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းခံရကြောင်း၊ ပြည်သူ ကြား က ရိုဟင်ဂျာ စကား
These Photos documents said GENOCIDE, ဒီဓါတ်ပုံတွေက လူမျိုးတုန်း သတ်ဖြတ်ကြောင်း သက်သေခံချက် ဖြစ်တယ်။
ပညာရေးဌာနတွင်ဘာသာခြားအားရှစ်ခိုးခိုင်းခြင်း မရှိဘဲ နမ္မတူး အမက(၃)၊ ကျောင်းအုပ်က အဓမ္မ ရှစ်ခိုး ခိုင်းခြင်း အပေါ် ပြသနာ တက်
Time မဂ္ဂဇင်း ဖော်ပြချက် အပေါ် မြန်မာလူထု အမြင်
သင်္ကန်းဝတ် ဦးဝီရသူ ဦးဆောင် သော အဖွဲ့ သည် စနစ်တကျကြိုတင် စီစဉ် ကာ လူသတ်မှု များ ကို ဆက်တိုက် ကျူးလွန်နေကြကြောင်း စင်ကာပူထုတ် စထရိတ်တိုင်မ်း သတင်းစာ မှ တရားဝင် ရေးသား
လားရှိုးတွင်ပဋိပက္ခဖြစ်၊အဆောက်အအုံနှင့် ဆိုင်ခန်းများ မီးရှို့ ဖျက် ဆီး ခံ ရ
Photo News Lashio, Police accompanied with terrorist: ဓါတ်ပုံ သတင်း
မိတ်ဆွေနည်းကံမွဲလှတဲ့မြန်မာမွတ်စလင် (သို့မဟုတ်) ဦးအောင်တင်က မင်းကိုနိုင်ဝေဖန်ခြင်း
View of Lashio, Burma: လားရှိုးမြို့ ယနေ့ နေ့လည်မြင်းကွင်း (ဓါတ်ပုံများ)
လားရှိုးမြို့ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ်၊ ( ပြန်ကြားရေး ဒု-၀န်ကြီး ဦးရဲထွဋ် ၊သစ်ထူးလွင်)
လားရှိုးမြို့ အကြမ်းဖက်မှုမှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံများ
The 8 Stages of Genocide Against Burma’s Rohingya
Prophet Mohammed(SS) and other Image: တမန်တော်မိုဟမ္မဒ်(စ)နှင့်အခြား ဓါတ်ပုံ
မိတ္ထီလာမြို့ဦး ဗလီနား အောင်ဇေယျာ နယ်မြေရှိ မွတ်စလင် သုဿန်ဟောင်းအား ယနေ့ မနက် ၁၀ နာရီ အချိန်ခန့်က မြေထိုးစက်များ အသုံးပြုပြီး ဖျက်သိမ်းနေ
အကြမ်းဘက်ပဋိပက္ခများအားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေခံမှ သုံးသပ်ခြင်း အပိုင်း-၁ ( ဦးအောင်ထူး- ရှေ့နေ)
မင်းလှ လယ်သမားများ ရေနံသူခိုးများရန် ကြောက်နေရ
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့် “ဝ” တောင်းဆိုမှု လွှတ်တော် တင်ပေးမည်
Rescue operation after Myanmar boats sink
လူအိုတွေ နိုင်ငံရေး မလုပ်သင့်ကြောင်း ပြောတဲ့ ဦးခင်ညွန့်နဲ့ …
ထိုင်းနိုင်ငံကို လူပွဲစားနဲ့ တရားမ၀င်ရောက်လာတဲ့ မြန်မာ ၈၀ ကျော်ကို နေရပ်ပြန်ပို့
၈၈ ကျောင်းသားအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ အမေရိကန်ခရီးစဉ်အတွင်း OIC အဖွဲ့အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံမည်
ဒုက္ခသည် ၇ သောင်းခန့် မုန်တိုင်းဘေးလွတ်ရာ ရွှေ့ပြောင်းရန် ငြင်းဆန်
မဟာဆန် ဆိုင်ကလုန်း အနီရောင် အရေးပေါ်အဆင့်သို့ရောက်ရှိ
မြန်မာပြည်ကို တိုက်ခိုက်မည်ဟု အင်ဒို ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်က ခြိမ်းခြောက်
ပြည်တွင်း၌အကြမ်းဖက်ဖေါက်ခွဲဖျက်စီးမှုများ ပြုလုပ်ရန်သတင်းများရရှိထားသဖြင့်လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်ဆောင် ရွက်ရန်ညွှန်ကြားထား၊အစ္စလာမ် ဘာသာဝင်အများစုနေထိုင်သည့်မြို့များ၌စီမံ ချက်ဖြင့် စုံစမ်းစစ် ဆေး လျက်ရှိ
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းနေထိုင်အားလုံးအားနိုင်ငံသား ဟုတ်မဟုတ်စိစစ်ရာတွင် U N နှင့်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့ အစည်းများအားအသိသက်သေထား၍ပြီးပြတ် အောင် စိစစ် ကောက် ယူသွားမည်။
အင်ဒိုနီရှား နိုင်ငံသားများက မြန်မာနိုင်ငံမှ မွတ်စလင်မ်များ လူ့အခွင့်ရေးချိုးဖောက်ခံရမှုအပေါ် မကျေနပ်မှုကြောင့် တရားဝင်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
အိုးအိမ်သိမ်း မြေကွက်များ လျော်ကြေး ရယူလိုဟု ပိုင်ရှင်များ တောင်းဆို
အများသိစေရန် ကြေညာချက်များ ပုဂ္ဂလိက သတင်းစာများတွင် ထည့်သွင်းမှု တရားဝင်ဟုဆို
DKBA တပ်ရင်းများ ရွှေ့မပေးနိုင်
စက်မှုဇုန်များ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီစေရန် ဆောင်ရွက်မည်
ချေ အီး ချေ လန့်
စစ်တွေမြို့၌ ဒုက္ခသည်များနှင့် လ၀ကများအကြား တင်းမာမှုကြောင့်ပစ်ခတ်ရာ ကလေးတစ်ဦး ဒဏ်ရာရ
နိုင်ငံတော်သမ္မတအဖြစ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဝင် ရောက် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေရန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ကိုပြင်ဆင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ပြောကြား
တိုင်းရင်းမီဒီယာညီလာခံတွင် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားမီဒီယာ အခန်းကဏ္ဍ ဆွေးနွေးမည်
မြစ်ကြီးနား မလိယန်စခန်း ဒုက္ခသည်များစားဝတ်နေရေးအခက်ကြုံနေဆဲ
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ရိုဟင်ဂျာမွတ်ဆလင်များအပေါ်လူသား မဆန်သောဖိနှိပ်ညှင်းပမ်းမှုများ နှင့် လူမျိုးသုဉ်းသတ်ဖြတ်မှုများ
မြန်မာအစိုးရ ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး ဒေါ်အောင် ဆန်းစု ကြည် ဝေဖန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဂျပန်ခရီးစဉ်မှ လူ နည်း စု မြန်မာ မွတ်စလင်များ အရေးပြောကြား ချက်
မြန်မာပြည်အရေး OIC ပါဝင်ရန် မလိုအပ် ဆို
NHK… နှင့် ဒေါ်စုအင်တာဗျူး
DIRECTOR GENERAL OF ARU APPEALS TO OIC MEMBER STATES TO STEP UP THEIR EFFORTS BY USING BILATERAL RELATIONS FOR FINDING A SOLUTION TO THE CRISIS FACED BY ROHINGYA AND MYANMAR MUSLIMS IN MYANMAR
မြန်မာ နိုင်ငံတကာ သတင်းများ
Visitors’ Countries Since 4- 12- 2012, ဖတ်သူတို့ ဌာနေ